Dom » Entries tagged with "yale"
Yale dia nanambara ny fiaraha-miasa vaovao amin'ny DoorBird
Taorian'ny fanombohan'ny vokatra vaovao toy ny Linus® Smart Lock, vao haingana i Yale dia mampivelatra karazana fampifangaroana miaraka amin'ireo marika mpiara-miasa. Ny iray vaovao dia ny mifanentana amin'ny intercom video IP DoorBird. Ankehitriny ny mpanjifa dia afaka manokatra lavitra ny ...
Fakan-tsary New Yale
3 Martsa 2021
Yale, mpanamboatra fakan-tsary malaza, dia nampahafantatra anay ny vokatra vaovao. Ireo fakan-tsary vaovao dia tokony ho ao anatiny sy ety ivelany. Andininy misimisy kokoa etsy ambany! Tolotra iray, azo atao maro Ny fakan-tsary voalohany ampiasaina hanaraha-maso ny atin'ny trano ...
Boaty parcel Smart HomeKit misy famandrihana
hidy maranitra, Yale
Manana olana amin'ny fandefasana fonosana amin'ireo mpaniraka ve ianao? Tsy misy olona haka azy ireo? Ankehitriny dia nisy vahaolana tena mahaliana avy amin'i Yale. Ho fanampin'izany, manana fanohanana ny HomeKit izy io. Yale dia naneho vokatra vaovao roa tamin'ny CES 2020, ankehitriny ...